05-05-2009 08:51 PM #21
Singapore က QS တွေအတွက် Unit Rates
Singapore မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ QS တွေအတွက် Unit Rate file လေးပါ။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ထားတဲ. date လေးလဲပါပါတယ်။
အသုံးဝင်/မ၀င်တော. မသိဘူး။ လိုအပ်ရင် အောက်က လင်.မှာယူပါ။ ပထမဦးဆုံးတင်တာဖြစ်တဲ.အတွက်အဆင်မပြေရင်လဲသိပါရစေ။
http://www.ziddu.com/download/4616525/unitratesupdated on 0209.pdf.html
hsu hsu, January Gal, phyo, YATANAR HTAY, ကိုထွန်း
05-24-2009 01:10 PM #22
Singapore နိုင်ငံက QS တွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ website လေးတစ်ခုပါ။
Main Contractor မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ QS ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Sub-Contractor မှာအလုပ်လုပ်တဲ့QS ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးဝင်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုဒ်မှာ Singapore နိုင်ငံက Business Opportunities အားလုံးကိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။ Tender နဲ. Quotation အတွက်လိုအပ်တဲ. အချက်အလက်တွေကို attachment အနေနဲ့ပေးထားပါတယ်။
တခါတရံမှာ ကိုယ်ဆီကို Quotation တင်ဖို့တောင်းတဲ့ Main Contractor တွေက Information အပြည့်မပေးရင် Quotation တွက်ရတာ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် လိုအပ်တဲ့ Information ကို အဲဒီမှာ သွားရှာကြည့်ပါ။ Project name ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကနေခေါ်တယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိခဲ့ရင် ရှာလို့ရပါတယ်။
Tender ဝင်ပြိုင်ရင်လည်း အဲဒီကနေ ဝင်ပြိုင်ရပါတယ်။
Tender &amp; Quotation Award ကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝင်ပြိုင်တဲ့ Tender or Quotation မှာ Amount ဘယ်လောက်နဲ့ ဘယ် company ကနေ ရသွားတယ်ဆိုတာလဲကြည့်လို့ရပါတယ်။
January Gal, nyanstar, phyo, WIDAD, ကိုထွန်း
07-01-2010 10:04 PM #23
Re: QS တစ်ယောက်အကြောင်း
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်သိသလောက် အဆောက်အဦ တခုရဲ့ Estimate ကို တင်ပေးပါမယ် ....
The Following User Says Thank You to forevernaw For This Useful Post:
07-01-2010 10:38 PM #24
[quote author=forevernaw link=topic=585.msg57281#msg57281 date=1277998496]
ဖိုရမ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ သိသမျှတွေကိုဝေမျှပေးပါဦးဗျာ။ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီရှိရင်လည်းတောင်းနိုင်ပါတယ်။
တင်ပေးမယ့် Estimate တွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ။ k
07-02-2010 01:50 AM #25
[move]ပို့စ် 10 ခု ပြည့်အောင်တင်မယ်နော်..... [/move]
ကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့ ( ၉၀ x ၁၂၀)ပေ အဆောက်အဦ တခုရဲ့ Estimate ကို attach file နဲ့တင်ပေးပါမယ် .....
ဒီအဆောက်အဦမှာ Steel Structure အပိုင်းနဲ့ R.C အပိုင်း ဆိုပြီး ၂ ခုခွဲတွက်ထားပါတယ်....
R.C အပိုင်းမှာတော့ Footing ,Ground beam and Short Column ပါပါတယ်....
Steel Structure အပိုင်းမှာတော့ Column နဲ့ Roofing frame တွေ ပါပါတယ်....
ကျွန်တော်ခုတွက်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ ဌာနကို တင်ထားတဲ့ Estimate ပါ....
ခုတော့ Estimate ပဲတင်ထားပေးမယ်နော် ....နောက်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်ကျ ဒီ Estimate ရဲ့ AutoCad ပုံတွေပါတင်ပေးပါမယ်...
[move] :applaus ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်...Forevernaw..[/move]
Circuit 5.png (498.2 KB, 24 views)
Circuit 6.png (35.0 KB, 326 views)
Circuit 7.png (34.5 KB, 333 views)
Circuit 5.png (498.2 KB, 8 views)
Circuit 6.png (35.0 KB, 325 views)
Circuit 5.png (498.2 KB, 13 views)
Circuit 6.png (35.0 KB, 323 views)
Circuit 7.png (34.5 KB, 324 views)
The Following3Users Say Thank You to forevernaw For This Useful Post:
hsu hsu, ကိုထွန်း, နွေဦး
12-23-2010 04:34 PM #26
ကို Mu_Si ရေ..ဒေါင်းဖို့ http://myanmar-ccg.org ကို နှိပ်လိုက်တိုင်း CCG forum web page ကိုပဲ တွေ့နေရတယ်...ပြန်တင်ပေးပါအုန်းနော်..
The Following4Users Say Thank You to hsu hsu For This Useful Post:
tunaungkyaw, ကိုထွန်း, ကိုလင်း, နွေဦး
08-09-2012 02:53 PM #27
Originally Posted by hsu hsu
ဆော်ရိးပါ အစ်ကို.. ကျွန်တော်က Mu_Si အကောင့်ပါ.. အခုမှ ပြန်ရောက်ပါတယ်.. ပထမအကောင့် မြန်မာအင်ဂျင်နိယာ ဖိုရမ်အချိန်းမှာ ဘယ်လိုမှ password recover ပြန်ခေါ်မရလို့.. ဒီအကောင့်နဲ့ ပြန်ဝင်ထားတာပါ..
Myanmar CCG ဆိုက်က ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကပဲ ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်.. မြန်မာ ပြန်ရောက်နေတာ့ ဆာဗာ ကိုင်ပေးမယ့်သူ မရှိဘဲ ကကျိုးကကြောင်ဖြစ်နေလို့ပါ.. အနော် ဒီမှာ same format ကို ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်.. project ပြီးတော့ နောက်ဆုံး Claim လုပ်ထားတာလေးတွေပါ.. လိုအပ်တာ သူသုံးနိုင်ပါတယ်..
နောက်လဲ အချိန်ရရင် ရသလို.. Excel နဲ့ ဖိုင်လေးတွေ တင်ပေးပါ့မယ်..
*** ကိုရေခါးရေ... ဖြစ်နိုင်ရင် မူးစိ အကောင့်ပို့စ်တွေ ကို ဒီအကောင့်နဲ့ ချိန်းပြီး မူးစိအကောင့်ကို ဖျက်ပေးပါလား ခင်ဗျာ..
01_Measurement for Claim workdone (final).rar (108.2 KB, 91 views)
02_Summary_of_Qty_workdone_Aug_08(Final).rar (61.1 KB, 85 views)
The Following4Users Say Thank You to William Thet For This Useful Post:
January Gal, tunaungkyaw, WIDAD, ကိုထွန်း
08-09-2012 03:20 PM #28
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က.. တင်ထားတဲ့ quotation လေးတစ်ခုကို ပြန် Share လိုက်ပါတယ်. ကျောက်ဖြူက Daewoo Project အတွက်တင်တာပ့ါ..
နောက်တော့ မလုပ်ဖြစ်လို့ release လုပ်လိုက်ပါတယ်.. .. မြန်မာမှာ သိပ်မသုံးသေးတဲ့ Category ခွဲပြီးတင်တဲ့ ပုံစံလေးပါ..
တစ်ကယ်လို့.. အခြားတစ်ယောက်များ လိုအပ်လို့ format လေးတစ်ခု ရသွားတယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ်....
COST ESTIMATE BQ-01.rar (32.4 KB, 110 views)
AndrewSway, tunaungkyaw, WIDAD, ကိုထွန်း
08-09-2012 07:57 PM #29
Originally Posted by William Thet
ကိုမူးစိ ကောင်းတာကတော့ ဒီအကောင့်ကို ကျနော်ခဏနာမည်ပြောင်းပြီး Mu_Si ကို William Thet နဲ့ email တွေကိုပါ ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ချင်တယ်.. ဟိုဟာက အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ user migration လုပ်လို့မရလို့ပါ။ how about my advise?
08-10-2012 12:48 PM #30
ko mu_si ရေ ကျနော်လုပ်လိုက်ပြီနော် ပြောင်းလိုက်တဲ့ account အင်ဖိုကို ကိုမူးစိမေးလ်ထဲလှမ်းပို့ထားလိုက်ပါတယ်။
User Marge တွေ့လို့ combine လုပ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။